နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်၏ကုန်ကျစရိတ် - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
Lex Artifex LLP, တစ်ဦး နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် Intellectual Property Law Firm သူတို့ရဲ့ Intellectual Property ကာကွယ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုဖို့ IP ကို ​​Helpdesk မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် (အိုင်ပီ) နှင့်၎င်းတို့၏ Intellectual Property ခငြ့်အရေးပြဋ္ဌာန်း (IPR) နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်သို့မဟုတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာသည့်အခါ. This publication givesasnapshot of the cost of filingapatent application in Nigeria.
လျှောက်လွှာဖြည့်စွက် - (သဘောတူညီချက်)
လျှောက်လွှာဖြည့်စွက် – (Non-သဘောတူညီချက်)
၏ပိုလျှံအတွက်တောင်းဆိုမှုများများအတွက်အပိုဆောင်းတာဝန်ခံ 10, ပြောဆိုချက်ကိုနှုန်း
ကနေနှစ်စဉ်ကြေးများ၏ငွေပေးချေမှုရမည့် 2ကြိမ်မြောက် ယင်းမှ 20ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်
2ကြိမ်မြောက် သို့ 3တတိယအကြိမ်မြောက် ခုနှစ်
4ကြိမ်မြောက် သို့ 6ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်
7ကြိမ်မြောက် သို့ 9ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်
10ကြိမ်မြောက် သို့ 12ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်
13ကြိမ်မြောက် သို့ 15ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်
16ရန်ကြိမ်မြောက် 20ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်
နှစ်စဉ်ထုတ်ပေးငွေများ၏ငွေပေးချေမှု attesting လက်မှတ်ရယူ
ဝန်ဆောင်ခပေးဆောင်ဖို့အချိန် extension ကိုများအတွက်လျှောက်လွှာ
တာဝန်ကျတဲ့နေရာ, အဖှဲ့ပေါငျးစညျးခွငျး, လိုင်စင်, နှင့် / သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်အတွက်အကျိုးစီးပွားအသံဖမ်း
ပြင်ဆင်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်တဦးတည်းမူပိုင်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားလျှောက်လွှာအတွက်အထူးသ၏ပြုပြင်မွမ်းမံ
ငွေထုတ်ပေးမှုများကို (e.g. စာပို့ခ, ဘဏ်စွဲချက်, စသည်တို့ကို)
သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းများ certified ရရှိထားပြီးမိတ္တူရယူ
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ File ကိုဘယ်လို→